Tokinao | Novambra 2008
Ny tokony hiblaogevana momba an'i Afrika ve ?
Tsotra ny fijeriko :) :
Afrika dia kontinanta
- isan'ny lehibe,
- fahiny indrindra satria nahitàna ny dian'ny olombelona voalohany indrindra (araka ny fijerin'ny siantifika),
- mbola sahirana : noho ny antony anatiny (tsy fahaiza-mitantana, ady an-trano, sns.), sy noho ny antony hafa tsy azo idovirana : ny fanatontoloana.
Noho ireo dia tsy tokony ho latsa-danja amin'ny sehatry ny blaogy, sy ny sehatra iraisam-pirenena hafa io Kontinanta io.
Afaka adidy aho ô :). Maimaika ka dia tsy dia nataoko be resaka. tsy dia ho afaka hamaly ara-potoana izay hafatrareo koa satria sahirana kely :).
Mazotoa daholo ô ;). Ny mpiblaogy ho tagevana dia ialan-tsiny fa tsy mahita. Tsy maintsy mitety ireo blaogy isan-karazany mantsy vao hahita hoe : iza no efa nanao sy ny hoe iza no mbola tsy nanao). Ny tenako anef tsy dia afa-miserasera ato ato :(.
Mandrapiblaogy e :)!
# Posted by tokinao :: Resaka mandalo:: Hametraka hevitra (16) :: Rohy maharitra :: Verindrohy (trackback) (0)
Raha misy olona milaza ny tenany ho "mpanetry tena sy tsy tia sehoseho" ary matetika averimberiny izany isaky ny miresaka izy. Tena manetry tena ve izany olona izany sa kosa tiany ho izany toetra izany no ahafantaran'ny olona azy ?
Raha sary vitsy no ananako momba ny morontsirak'i Madagasikara, satria avy ao afovoan-tany aho ... mpanavakavaka foko ve aho?
Raha lehibe tamina toerana iray aho, ary tsy mba nahita tany hafa. Midika ve izany fa tsy ampy fitaizana aho?
Betsaka ireo karazana dinika eto amin'ny aterineto, ary misy ny lohavevitra sasany no efa tranainy dia tranainy sy mampisara-bazana fotsiny ; Mampisara-bazana satria dia ompa sy teny ratsy no iafarany. Mampandroso ve ireny hoy 'nareo ?
Raha mba mizara izay hainy ny olona iray ... fireharehana ve izany ?